NgoMgqibelo, Agasti 15, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
"Ngoku ndiyazi ukuba kutheni ufuna ukundizonda!", Wavuma uChris (ala Limp Bizkit) ngaxeshanye kwingxoxo yephaneli. Umbuzo ubhekisa kwinto ekhupha abezondo kwihlabathi losasazo. Inyani yile,, njengoko abantu abakwi-Intanethi bezakhela uphawu lwabo kwaye baphuhlise ilizwi labo kunye nobungcali kumashishini ... abanye abantu baya kubathiya ngenxa yoko. Ndiyathandabuza ukuba nabani na uyamthiya uChris Brogan… kodwa ukuba bayenzile kungenxa yesiphiwo sakhe esihle.
UChris Brogan Rocked BlogIndiana.
UChris wayenendawo emnandi yesilayidi kunye nentetho enomdla - kubandakanya izingqinisiso ezithandekayo ze-wacky pop yenkcubeko (kubandakanya uFergy!), Unxibelelwano nesihlwele (besikhalimela ngokuba neembaleki nje ezimbalwa kwigumbi!), Kunye nomboniso opholileyo. Kukho italente engakholelekiyo endiyibonayo kwizithethi ezinje ngoChris endizibona kuMalcolm Gladwell, Seth Godin nabanye… ukukwazi ukuthatha umba onzima nobunzima kwaye uwuchaze ngokulula.
U-Brogan ukwenzile oku ngokuqhubeka kwakhe kophawu lwangoku kunye nendlela ehambelana ngayo nemidiya yoluntu, ukusuka Ukwazisa ngeZenzo ezandisiweyo. Funda iposti yeenkcukacha, nantsi ingqungquthela yam:
Ukwazisa Ukusetyenziswa kwentengiso efanelekileyo yokwazisa wena, imveliso yakho, okanye inkonzo yakho.
ingqalelo Ukusetyenziswa kwabalamli basekuhlaleni ukubonelela abantu ngeendlela zokuthatha inxaxheba.
uthethathethwano Unxibelelwano oluzinzileyo phakathi kwakho noluntu lwakho.
enze -Uguquko ... ukhuphelo, ubhaliso, ukuthengwa, njl.
Ukwandiswa Ithuba emva kokuphunyezwa ukukhuthaza umsitho kunye neziphumo.
UChris wenze umsebenzi okrelekrele kwaye unzima apha wokuchaza inkqubo, ke ndiza kongeza iisenti zam ezi-2. (Ndiyakucaphukela ukwenza oku… kundenza ndivakale ngathi ndibuyela ngasemva kwihagu… ndiyaqikelela ukuba ndinje!) uhlalutyo.
Ndicinga ukuba uHlahlelo lubalulekile… ekuqaleni nasekupheleni kwenkqubo ukuze ishishini liqale inkqubo ngamandla angakumbi ehashe- kunye nokucokisa nokuphucula inkqubo ngalo lonke ixesha. Ukulinganiswa kweziphumo kubalulekile ukuze amashishini aqonde apho anokunyusa khona ubuncwane bawo obuncinci kwimpembelelo ephezulu.
Ndingayifundanga incwadi kaChris noJulian okwangoku- ndijonge phambili ukuyichola kwaye ndibone indlela ukukhula kunye nokulinganiswa kwesicwangciso kudlala ngokuqhubekayo.
tags: bloggoanaUChris Brogan
#BlogIndiana: UJason Falls, iiBlogger kunye noothixo bakaGoogle
Agasti 16, 2009 kwi-2: 27 AM
Ndilunge kakhulu ukuba ungathi, uDoug. Ndinexesha elithile, kwaye ndinombulelo ukuba nawe egumbini, njengenye yeenkwenkwezi zalapha. Ndiyathemba ukuba iluncedo, kwaye ndijonge phambili ukukubona kwakhona kungekudala. :)
Agasti 17, 2009 kwi-2: 36 AM
Awunakulinda ukuba iindlela zethu ziwele kwakhona!
Agasti 16, 2009 ngo-11: 18 PM
Hee Doug, ndiyavuma ukuba ukongeza uHlaziyo linyathelo elibalulekileyo, kodwa ndicinga ukuba ulibeke kwindawo engeyiyo. Ndiya kwenza uHlaziyo emva koKwenziwa nangaphambi koLwandiso, kuba uLwandiso yindawo yokuqala, hayi indawo yokuphela.
Agasti 17, 2009 kwi-2: 38 AM
Ndikunye nawe, Tim. Ndizabalazile ukuba ndingafaki uhlalutyo phakathi kwenyathelo ngalinye! Ndiyigeek iyonke malunga nokulinganisa kunye nokujonga. Uninzi lwethu luxakeke kakhulu ekusebenzeni kangangokuba asisoloko sithatha ixesha.
Bekumnandi kakhulu ukuchitha ixesha nawe kule veki, Tim! Ukuba ungathanda ukwenza iposti yebhlog yeendwendwe- nceda fikelela!